ချစ်သူဖြစ်နေရင်တောင် ဒါမျိုးလာလုပ်ရင် ဥပဒေနဲ့ငြိစွန်းလို့ ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်နိုင်ပါတယ်….
ချစ်သူစုံတွဲတွေ အပါအဝင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကြားမှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြင့် ဖြစ်စေ ဘယ်လိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုမျိုး မဆို ဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းပါတယ်။
ကိုယ်နဲ့ ဘယ်လောက်ချစ်နေတဲ့ ချစ်သူရည်းစားပဲ ဖြစ်နေပါစေ ခုဖော်ပြမယ့် အချက်တွေထဲက တစ်ခုခု လာလုပ်ရင်တော့ ဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းတာကြောင့် ရဲစခန်း ခေါ်သွားလို့ရပါတယ်။
ကိုယ့်ကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ ချစ်သူကို သည်းခံနေမယ့်အစား တရားဥပဒေအရ ဖြေရှင်းလိုက်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင့်ချစ်သူက သင့်ရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဓာတ်ပုံတွေကို အွန်လိုင်းမှာဖြစ်စေ၊ တခြားဘယ်နေရာမှာ အဆို ပြန့်နှံ့စေခဲ့ရင်တော့ ဥပဒေနဲ့ငြိစွန်းတာကြောင့် ရဲတိုင်ပြီးအမှုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
(၂) ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များပြုလုပ်ခြင်း
ချစ်သူမကလို့ လင်မယားဆိုရင်တောင် တစ်ယောက်က အခြားတစ်ယောက်ရဲ့ ငွေကြေးဘဏ္ဍာ (ဘဏ်အကောင့်) နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝင်စွက်ဖက်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ဥပမာ သူတို့မတတ်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းကို အတင်းဝယ်ပေးခိုင်းတာမျိုးပါ။
သင့်ချစ်သူ၊ ခင်ပွန်းက သင့်ကို နှိမ်တာ၊ သင်အသုံးမကျတဲ့ အကြောင်းတွေကို ထပ်ခါထပ်ခါပြောပြီး စိတ်ဓာတ်ကို ချိုးနှိမ်တာမျိုးဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု ဖြစ်တာကြောင့် အမှုဖွင့်လို့ရပါတယ်။
သင့်ချစ်သူ၊ ခင်ပွန်းဟာ သင့်သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိဘတွေနဲ့ ပေးမတွေ့တာ၊ သူတို့နဲ့ဆက်သွယ်လို့မရအောင် လုပ်တာမျိုးဆိုရင်တော့ ဥပဒေနဲ့ငြိစွန်းနေပါတယ်။
သင့်ချစ်သူ၊ ခင်ပွန်းဟာ ကိုယ်ထိလက်ရောက်သင့်ကို မနှိပ်စက်ရင်တောင် သင့်ကိုကြောက်လန့်အောင်လုပ်တယ်၊ အော်ဟစ်ဆူပူတယ်၊ ပစ္စည်းတွေကိုင်ပေါက်တယ်၊နံရံကိုလက်သီးနဲ့ထိုးတယ်၊
သူ့ကိုသူသတ်သေမယ်လို့ ပြောတယ်၊ သင့်ကိုသတ်မယ်လို့ ပြောတယ်၊ သင့်စိတ်ကို ကြောက်လန့်အောင် ခြောက်လှန့်တဲ့ ဘယ်လိုအပြုအမူကိုပဲ လုပ်လုပ် ဥပဒေနဲ့ငြိစွန်းတာကြောင့် ရဲတိုင်လို့ ရပါတယ်။
သင့်ချစ်သူ၊ ခင်ပွန်းဟာ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖြစ်တဲ့ ဘဏ်အကောင့် password၊ Facebook သို့မဟုတ် Email password တွေကို သိဖို့ကြိုးစားတယ်၊ သင့်ရဲု့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေကို ဝင်စွက်ဖက်နေတယ်၊ သင့်ကို တိတ်တိတ်လေး အမြဲလိုက်ချောင်းနေတယ် ဆိုရင် ရဲတိုင်လို့ ရပါတယ်။
နှစ်ဦးနှစ်ဖက် စိတ်မပါပဲ လိင်ဆက်ဆံခိုင်းတာ၊ သူ့ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို အတင်းအကျပ် လိုက်နာခိုင်းတာ၊ အဝတ်အစားအပြင်အဆင်ကအစ သူ့သဘောအတိုင်းပဲ လိုက်ခိုင်းတာမျိုးဆိုရင်တော့ ဥပဒေနဲ့ငြိစွန်းတာကြောင့် ရဲတိုင်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ချစ်သူ၊ ခင်ပွန်းဟာ လူတိုင်းလိုလိုနဲ့သင့်ကို သဝန်တိုတယ်၊ မသင်္ကာအမြဲဖြစ်နေတယ်၊ သင့်ကိုချုပ်ချယ်ပြီး အမြဲတမ်း ပြသနာရှာ၊ ရစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဥပဒေနဲ့ငြိစွန်းတာကြောင့် ရဲတိုင်လို့ရပါတယ်။
ခဈြသူဖွဈနရေငျတောငျ ဒါမြိုးလာလုပျရငျ ဥပဒနေဲ့ငွိစှနျးလို့ ရဲစခနျးမှာအမှုဖှငျ့နိုငျပါတယျ….
ခဈြသူစုံတှဲတှေ အပါအဝငျ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျကွားမှာ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာဖွငျ့ဖွဈစေ၊ စိတျပိုငျးဆိုငျရာဖွငျ့ ဖွဈစေ ဘယျလိုညှငျးပနျးနှိပျစကျမှုမြိုး မဆို ဥပဒနေဲ့ ငွိစှနျးပါတယျ။
ကိုယျနဲ့ ဘယျလောကျခဈြနတေဲ့ ခဈြသူရညျးစားပဲ ဖွဈနပေါစေ ခုဖျောပွမယျ့ အခကျြတှထေဲက တဈခုခု လာလုပျရငျတော့ ဥပဒနေဲ့ ငွိစှနျးတာကွောငျ့ ရဲစခနျး ချေါသှားလို့ရပါတယျ။
ကိုယျ့ကို ညှငျးပနျးနှိပျစကျတဲ့ ခဈြသူကို သညျးခံနမေယျ့အစား တရားဥပဒအေရ ဖွရှေငျးလိုကျတာ အကောငျးဆုံးဖွဈပါတယျ။
(၂) ငှကွေေးဆိုငျရာ ကနျ့သတျခကျြမြားပွုလုပျခွငျး
သငျ့ခဈြသူ၊ ခငျပှနျးက သငျ့ကို နှိမျတာ၊ သငျအသုံးမကတြဲ့ အကွောငျးတှကေို ထပျခါထပျခါပွောပွီး စိတျဓာတျကို ခြိုးနှိမျတာမြိုးဟာ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ညှငျးပနျးနှိပျစကျမှု ဖွဈတာကွောငျ့ အမှုဖှငျ့လို့ရပါတယျ။
သငျ့ခဈြသူ၊ ခငျပှနျးဟာ သငျ့သူငယျခငြျးတှေ၊ မိဘတှနေဲ့ ပေးမတှတေ့ာ၊ သူတို့နဲ့ဆကျသှယျလို့မရအောငျ လုပျတာမြိုးဆိုရငျတော့ ဥပဒနေဲ့ငွိစှနျးနပေါတယျ။
သငျ့ခဈြသူ၊ ခငျပှနျးဟာ ကိုယျထိလကျရောကျသငျ့ကို မနှိပျစကျရငျတောငျ သငျ့ကိုကွောကျလနျ့အောငျလုပျတယျ၊ အျောဟဈဆူပူတယျ၊ ပစ်စညျးတှကေိုငျပေါကျတယျ၊နံရံကိုလကျသီးနဲ့ထိုးတယျ၊
သူ့ကိုသူသတျသမေယျလို့ ပွောတယျ၊ သငျ့ကိုသတျမယျလို့ ပွောတယျ၊ သငျ့စိတျကို ကွောကျလနျ့အောငျ ခွောကျလှနျ့တဲ့ ဘယျလိုအပွုအမူကိုပဲ လုပျလုပျ ဥပဒနေဲ့ငွိစှနျးတာကွောငျ့ ရဲတိုငျလို့ ရပါတယျ။
သငျ့ခဈြသူ၊ ခငျပှနျးဟာ သငျ့ရဲ့ကိုယျရေးကိုယျတာဖွဈတဲ့ ဘဏျအကောငျ့ password၊ Facebook သို့မဟုတျ Email password တှကေို သိဖို့ကွိုးစားတယျ၊ သငျ့ရဲု့ကိုယျရေးကိုယျတာတှကေို ဝငျစှကျဖကျနတေယျ၊ သငျ့ကို တိတျတိတျလေး အမွဲလိုကျခြောငျးနတေယျ ဆိုရငျ ရဲတိုငျလို့ ရပါတယျ။
သငျ့ခဈြသူ၊ ခငျပှနျးဟာ လူတိုငျးလိုလိုနဲ့သငျ့ကို သဝနျတိုတယျ၊ မသင်ျကာအမွဲဖွဈနတေယျ၊ သငျ့ကိုခြုပျခယျြပွီး အမွဲတမျး ပွသနာရှာ၊ ရဈနတေယျဆိုရငျတော့ ဥပဒနေဲ့ငွိစှနျးတာကွောငျ့ ရဲတိုငျလို့ရပါတယျ။